Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Hawaii bụ steeti US kacha nwee nrụgide ibi na ya
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Entertainment • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Hawaii bụ steeti US kacha nwee nrụgide ibi na ya.
Ọnụ ego ụlọ nke Hawaii bụ $ 1,293,301, nke atọ kachasị elu na US, ebe ọ nwekwara ọnụ ahịa mgbazinye kacha elu na America, na $ 1,327 kwa ọnwa. N'ihi nke a steeti nwere akara 49th kachasị njọ maka nrụgide metụtara ego, nke n'akụkụ 48th kacha njọ maka ihe gburugburu ebe obibi dị ka ọnọdụ okporo ụzọ dara ogbenye na ịbụ steeti nke abụọ na -ada ụda, dugara na Hawaii ịbụ steeti kacha nwee nrụgide na US.
Edegola Hawaii ka ọ bụrụ steeti kacha nwee nrụgide na US, na -abata dị ka otu n'ime steeti kachasị njọ maka ego na nrụgide metụtara gburugburu.
A họọrọ Florida dị ka steeti nke abụọ kacha nwee nrụgide na US, na -egosi ọkwa adịghị mma maka ego, ọrụ, ahụike na nrụgide metụtara gburugburu.
Vermont bụ steeti kacha enwe nchekasị, ọkwa dị ka steeti nke abụọ kacha enwe nchekasị maka ahụike yana ụdị nrụgide gburugburu.
Hawaii ka a na -ewere dị ka steeti kacha echegbu onwe na United States of America.
Ndị ọkachamara na -ehi ụra mere nyocha iji chọta ọnọdụ nrụgide US kacha ebi na ya, dabere na nyocha nke ihe 22 nrụgide dị iche iche metụtara ọrụ, ego, ahụike na gburugburu. Ọmụmụ ihe ahụ chọpụtara na Hawaii bụ steeti kacha echegbu onwe ya, Vermont dịkwa obere.
Steeti ahụ nwetara akara n'ime iri maka ihe ọ bụla, gụnyere ọnụ ụlọ na ụgwọ ụlọ, ego ha nwetara, ọnụego ịda mba, mmega ahụ, ọkwa ụra, ohere oghere na ọkwa mkpọtụ.
Hawaii nọ n'elu ndepụta ahụ mgbe ọ gbasasịrị nnukwu ego maka nrụgide na gburugburu ebe obibi. Ọnụ ego ụlọ steeti ahụ bụ $ 1,293,301, nke atọ kachasị na US, ebe ọ nwekwara ọnụ ahịa mgbazinye kacha elu na America, na $ 1,327 kwa ọnwa. N'ihi ya, steeti nwere 49th akara kacha njọ maka nrụgide metụtara ego, nke dị n'akụkụ 48th akara kacha njọ maka ihe gburugburu ebe obibi dị ka ọnọdụ okporo ụzọ adịghị mma na ịbụ steeti nke abụọ na -ada ụda, dugara na ya Hawaii ịbụ steeti kacha echegbu onwe na US.
Florida bụ steeti nke abụọ kacha enwe nrụgide, na -adịchaghị mma n'ihi ihe ndị dị ka enweghị ọrụ, ebe 6.5% nke ndị bi na -edebanye aha dị ka ndị na -enweghị ọrụ. Mkpokọta ego a na -agbanwe agbanwe na steeti ahụ, ọnụ ọgụgụ dị ala nke ụlọ ọrụ ahụike uche kwa mmadụ, ogige ntụrụndụ mba na oghere mepere emepe kwa square kilomita, na ọkwa mkpọtụ kpatara. Floridaogo dị ala.
N'ọgwụgwụ nke ọzọ, ọmụmụ ahụ gosiri Vermont dị ka steeti nrụgide kacha nta. Vermont akọpụtala ọkwa ịda ogbenye nke onye ọ bụla na -edebanye aha, na -ebelata oke nrụgide steeti metụtara ego. Steeti nwekwara akụkụ nke abụọ kachasị mma nke ụlọ ọrụ nlekọta ahụike nke onye ọ bụla, yana otu n'ime steeti kachasị maka mmega ahụ na ụra zuru oke, na-eduga n'ọkwa ọkwa steeti nke abụọ na ngalaba nrụgide metụtara ahụike.
Tim Slear ekwu, sị:
October 25, 2021 na 19: 32